maythaesue – it4a
New Normal မှာ ပုံစံအသစ်နဲ့ လုပ်ငန်းဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ။
Bank, ERP, Finance, IT4A, S/4HanaEnterpriseLedger, SAP
အခုလို Pandemic အချိန်ကာလကြီးမှာ လူချင်းတွေ့ရုံးထဲထိုင်ပြီးလုပ်မှ အလုပ်တွင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်…2021 မှာ Social Distancing လုပ် New Normal ပုံစံနဲ့ အလုပ်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ERP Software က အကောင်းဆုံး အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့… (၁) ERP Software တစ်ခုမှာ မတူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Purchase, Finance, Human Resources, Sales, Logistic, Customer Relationship Management (CRM), အပြင် E-Commerce တို့ပါဝင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်လည်ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်း Process ကြီးတစ်ခုလုံးကို ERP Software တစ်ခုထဲနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ (၂) ဒီလို Software […]
Intelligent Bank တစ်ခုအဖြစ်ကူးပြောင်းဖို့ ဘာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုမလဲ?
ERP, IntelligentBank, IT4A, SAP
New Normal မှာ Customer တွေပိုပြီးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် Traditional Bank တွေကနေပြီးတော့ Intelligent Bank တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ? ဘဏ်တွေက အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးချပြီး Customer တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလို နည်းပညာတွေကို အသုံးမချဘူးဆိုရင် အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ နယ်ပယ်မှာ နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနောက်ကျမကျန်ရအောင် Traditional Bank တွေကနေတစ်ဆင့် Intelligent Bank တွေအဖြစ်စတင်ကူးပြောင်းသင့်နေပါပြီ။ ဒီလို Intelligent Bank တစ်ခုအဖြစ်ကူးပြောင်းဖို့ ဘာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုမလဲ? 1. Customer Engagement ဘဏ်တွေအနေနဲ့ Customer တွေ Channel မျိုးစုံ (Omnichannel) ကနေပြီး လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင် ဆက်သွယ်လို့ရ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ User […]
Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ Data တွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ?
Customer Experience, ERP, IT4A, SAP
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲအားပေးမယ့် Customer တွေရှိဖို့ပါပဲ။ Customer ရှိမှသာ လုပ်ငန်းတွေကလည်ပတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးဆက်လက်တိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ Customer တွေကိုစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာ လက်ရှိ customer (existing customer) ထက် customer အသစ် (new customer) ကိုဆွဲဆောင် တာက ၅ဆပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းက Customer Relationship Management (CRM) လို့ခေါ်တဲ့ ရှိပြီးသား Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ Customer အသစ်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ အစရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအမေးများလာကြပါတယ်။ SAP ရဲ့ Customer Experience Soultion Software (Marketing Cloud, Commerce Cloud, Customer Data Cloud, Sales […]
E-Commerce လုပ်ငန်းများအတွက် SAP C/4HANA
CRM, E-Commerce, SAP, SAP C/4HANA
E-Commerce လုပ်ငန်းတစ်ခုကို C/4 Hana ကဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲ? အခုလို ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများက E-Commerce အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ E-Commerce လုပ်ငန်းများအတွက် C/4 Hana Service Cloud ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ E-Commerce လုပ်ငန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်မှိုလိုပေါက်လာတာနဲ့အမျှ ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Service ပေးဖို့က လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။ C/4 Hana Service Cloud ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် E-Commerce လုပ်ငန်းတွေရဲ့ Self Service, Assisted Service နဲ့ Field Service အစရှိတဲ့ Service ၃ခုလုံးကို Harmonized ဖြစ်စေပြီး Customer များကို ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Customer တစ်ယောက်က လူကြီးမင်းတို့ E-Commerce […]